Global Voices teny Malagasy » Fantaro Ireo Olona Manakana Ny Fametrahana Fantsona Lehibe Famokarana Etona Ao Atsimon’i Italia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2017 5:40 GMT 1	 · Mpanoratra 350.org Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Italia, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Pikantsary tamin'ny lahatsary misy ny fihetsiketsehana manohitra ny fantsona lehibe Trans Adriatic. Sary: Paolo Zuccotti / 350.org, nahazoana alalana.
Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny votoaty nivoaka voalohany tao amin'ny 350.org , izay anisan'ny fiarahamiasa amin'ny Global Voices.
Any amin'ny faritra atsimon'i Italia, mitarika fanoherana am-pilaminana mba hiarovana ny tanin'izy ireo sy ny fiarahamonin'izy ireo manoloana ny fametrahana fantsona goavana hamokarana etona ireo renim-pianakaviana, mpampianatra, mpiasan'ny fahasalamana, ray aman-drenibe sy mpamboly oliva eo an-toerana.
Nanomboka tamin'ny 13 Novambra, polisy an-jatony no nametraka ‘faritra mena’ manodidina ny toeram-panorenan'ny Trans Adriatic Pipeline (TAP), mandràra ny mpanao gazety, ny olom-pirenena sy ny manampahefam-panjakana tsy hiditra ao amin'ny faritra.
Na dia eo aza ny setriny mahery vaika nataon'ny mpitandro filaminana sy ny olona voasazy handoa onitra hatramin'ny 10.000 €, tapa-kevitra hanohy ny fanoheran'izy ireo mba hanakana ny fananganana ny TAP ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, ao Melendugno .
Ireto ny sasany tamin'ireo olona manakana ny tetikasa:
Mpanao asa tanana tsy manaiky intsony ny handaniana ny volam-bahoaka ho amin'ny tombotsoan'ny orinasa iraisampirenena maro samihafa i Valentina. Manakiana ny kolikoly sy ny tombontsoan'ny mpanao heloka bevava manodidina ny tetikasa izy.
Anna Maria dia miantso ny tenany ho renibe NoTAP (tsy mila TAP), miady ho amin'ny mahasoa ny tany. Mazoto izy hiaro ny tontolo iainana satria ny mijaly noho ny olana ara-pahasalamana ateraky ny olana ara-tontolo iainana ny zanaky ny iray tampo aminy.
Ben'ny tanàna lefitra ao Melendugno kosa i Simone Dima. Mahita ny TAP ho tetikasa tsy ilaina izay manimba ny toetr'andro sy ny toekarena ao an-toerana, izay mifototra amin'ny fizahan-tany sy ny fambolena izy.
Manohitra ny TAP i Francesco satria tiany arovana ny tany. Nokasaina haorina ao anatin'ny faritra voaaro ahitana hazo oliva fahiny, lakandrano, ala virjiny sy morontsiraka mahatalanjona ny fiantsonan'ny fantsona sy mpitondra etona.
Tovovavy iray mandray andraikitra hifikitra amin'ny fanoherana ny tetikasa napetraka an-terisetra sy tsy iriana anampian'ny fanjakana ireo vondron'orinasa iraisampirenena maro hanangan-javatra tsy nanontaniana ny hevi-bahoaka i Aurora, na dia eo aza ny fanoherana eo an-toerana efa nandritra ny enintaona, hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa.
Manohitra ny TAP i Sabina, izay hitany fa tetikasa tsy ilaina sy mampidi-doza ary mandrahona ny fivelomany amin'ny fizahan-tany ao San Foca. Nanoritra izy fa tsy olana ao an-toerana ihany ny TAP fa olana Eoropeana ihany koa izay tsy tokony hotontosaina na ao Salento na aiza na aiza.
Nahazo fanohanana hatrany ireo mponina ao an-toerana, satria niharan'ny teritery iraisam-pirenena ireo banky mba handà ny fampindramam-bola izay iankinan'ny tetikasa amin'ny fampandrosoana azy. Ohatra, mihamarobe ireo olona miantso ny Banky Fampiasam-bola Eoropeana mba hanohitra ny famatsiam-bola ny TAP izay mitentina 1,5 miliara €.
Ny TAP dia ampahany amin'ny tetikasa lehibe an'ny Vaomiera Eoropeana momba ny angovo antsoina hoe “Southern Gas Corridor” [Lalantsaran'ny Etona ao Atsimo]. Manery hampivelatra fotodrafitrasa vaovao momba ny famokarana etona fandrehitra ny Vondrona Eoropeana, na dia efa misy aza ny fotodrafitrasa miasa ambanin'ny fahafaha-manaony  ary na dia eo aza ny zava-misy fa tsy mifanaraka amin'ny Fifanarahana momba ny Fikorontanan'ny toetrandro natao tao Paris ny fampiroboroboana ny tsenan'ny etona fandrehitra.
Sarimihetsika nataon'i Paolo Zuccotti sy Jan Hajdelak ho an'ny 350.org. Mozika: Am-Trans avy amin'ny Podington Bear (Lisansa Attribution-NonCommercial 3.0 International – www.soundofpicture.com)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/28/111843/
 miasa ambanin'ny fahafaha-manaony: http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/1309-briefing-eu-gas-infrastructure-and-efsi-time-for-change
 tsy mifanaraka amin'ny Fifanarahana momba ny Fikorontanan'ny toetrandro natao tao Paris : http://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/natural_gas_and_climate_change_anderson_broderick_october2017.pdf